कोरियामा रहेका श्रीमानलाई भिडियो च्याट्मा सबै देखाइ दिनुपर्ने – News Portal of Global Nepali
कोरियामा रहेका श्रीमानलाई भिडियो च्याट्मा सबै देखाइ दिनुपर्ने
29th August 2017 मा प्रकाशित
हाम्रो समाज कुन दिशातिर अघि बढिरहेको छ, मानिसको मनोदशा कसरी विकसित हुँदै गइरहेको छ भन्ने कुरा जान्न मनोपरामर्शदातासँग साक्षात्कार गर्नैपर्ने हुन्छ । यिनै विषयलाई सार्वजनिक गर्न यसपटक कुमार राउतले मनोविद् सनम पौडेलसँग साक्षात्कार गरेका थिए । विशेष गरी यौन र मनोविज्ञानलाई ठीक ढंगले डो-याउने नैतिक शिक्षा हामीले बिर्सियौं भने समाजमा कस्ता घटना हुँदा रहेछन् भन्ने जानकारी सनमले दिएकी छन् । उनीसँग गरिएको कुराकानी :
० मनोविद् भन्नाले के बुझ्ने ?
– सामान्य अर्थमा अर्काको मनको कुरा जान्नेलाई मनोविद् भनिन्छ । तर यो मानसिक समस्या भएको व्यक्तिको पहिचान गर्ने वैज्ञानिक पद्धति हो । मानिसमा चिन्ताजन्य समस्या, डिपे्रसन, इन्जाइटी, आत्तिने, डराउनेलगायतका विविध समस्या हुन सक्छन् । उनीहरूको समस्या वैज्ञानिक पद्धतिबाट मनोविद्ले पत्ता लगाउन सक्छ ।
० मानिसमा किन यस्ता समस्या आउँछन् ?
– यसका विविध कारण हुनसक्छन्, बाइलोजिकल, सामाजिक र पारिवारिक समस्याले यस्ता समस्या उत्पन्न हुनसक्छ ।
० यसको उपचार पनि मनोविद्ले नै गर्ने हो ?
– चिकित्सक, थेरापी र मनोपरामर्शबाट उपचार हुन्छ । चिकित्सकले औषधि प्रयोग गर्छन् भने थेरापीले नशा र शरीरको अंगहरू ठीक ठाउँमा ल्याउँछ । मनोपरामर्शबाट पनि उपचार गरिन्छ ।
० कस्ता व्यक्तिलाई मनोपरामर्श दिनुहुन्छ ?
– क्याप नेपालमा आबद्ध छु, यो संस्थाले मनोरञ्जन क्षेत्रमा हिंसामा परेका महिला तथा किशोरीको उद्धार गर्छ । बालबालिका छन् भने उनीहरूलाई सेल्टरमा राखिन्छ । उनीहरूलाई समाजमा पुनस्र्थापना गर्न स्वास्थ्य सेवा, अध्ययन गर्न चाहनेलाई शिक्षा र मनोपरामर्श दिइन्छ । रेस्टुरेन्ट र डान्सवारका श्रमिकलाई हामी घुम्ती मनोपरामर्शको कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्छौं ।
० उनीहरूमा कस्तो समस्या देखिन्छ ?
– उनीहरूको कामको प्रकृति पनि त्यस्तै हुन्छ, ग्राहक र मालिकबाट उनीहरू शोषित हुन्छन्, उनीहरू आफ्नो कामको प्रकृति लुकाउँछन्, समस्या भन्न डराउँछन् । श्रम गरेर खान योग्यलाई मनोवैज्ञानिक बल दिन्छौं ।
० उनीहरूको मनोदशा कस्तो पाउनुभयो ?
– धेरैजसो डिपे्रसनमा परेका हुन्छन्, कोही कुलत र केही दुव्र्यसनी छन् । कोही थाहा नपाई हुन्छन् भने कतिपय आफूलाई यौन रोग लागेको समेत थाहा नपाउने हुन्छन् ।
० उनीहरूलाई के गर्न सकिन्छ ?
– हाम्रो अभियान उनीहरूलाई समाजमा पुनस्र्थापना गराउनु हो । औषधि उपचार, थेरापी अथवा काउन्सिलिङ गरिन्छ ।
० किन उनीहरू त्यस किसिमको जीवनशैली अपनाउँछन् ?
– यसका लागि सामाजिक सञ्जालले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । बलात्कार र अपराधका घटनालाई सामाजिक सञ्जालले प्रभावित पारेको हुन्छ । महँगो मोबाइल प्राप्त गर्न, इन्टरनेटको सजिलै पहुँचजस्ता आफ्ना आवश्यकता पूरा गर्न वयस्क नभई पाको उमेरको व्यक्तिसँग डेटिङ जाने गरेको पाइन्छ । यौन असन्तुष्टिले विवाहपछि परपुरुष वा महिलासँग सम्बन्ध राख्छन् ।
० मनोरोग धेरैजसो यौनसँग जोडिएको हुँदो रहेछ ?
– घटनाहरू अध्ययन गर्दा त्यस्तो देखिन्छ । यद्यपि सबै मनोरोग यौनसँग जोडिएको हुन्छ भन्न मिल्दैन । यद्यपि यौन असन्तुष्टि, विवाहपछि पनि परपुरुष वा परस्त्रीसँग सम्बन्ध बढाउने, बलात्कार, यौनजन्य घटना मनोरोगसँग जोडिएको भेटिन्छ ।
० जस्तो ?
– हाम्रा समाजमा यस्ता घटना धेरै छन्, जुन सार्वजनिक भएका हुँदैनन् । केही दृष्टान्त हेरौं, जस्तो एकजनाले यौन सम्पर्कका बेला श्रीमतीको अनुहारमा ऐश्वर्य रायको तस्बिर राख्ने गरेको बताए । श्रीमती नराम्ररी भई भनेर उसले श्रीमतीको अनुहारमा ऐश्वर्य रायको तस्बिर राखेको बताए । त्यस्तै, अर्को एक महिलाको श्रीमान् कोरियामा रहेछन् । कोरियामा रहेका श्रीमान्ले दैनिक दुई तीनपटक भिडियो कल गरेर भिडियोमा सबै कोठा देखाइदिनुपर्छ भन्थिन् । एक दाजुले बहिनीसँग यौन सम्पर्क गर्दा रहेछन् । बुवा–आमाले यौन सम्पर्क गरेको देखेर उसले पनि कस्तो हुँदो रहेछ भनेर बहिनीलाई प्रयोग गरेको रहेछ । यौन मनोविकारले निम्त्याउने घटना समाजमा प्रशस्त हुन्छन् ।
० मासहिस्ट्रिया चाहिँ के हो ?
– कमजोर मनस्थितिबाट उत्पन्न हुने घटना हो यो । यसमा यौन जोडिएको हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ । विवाह गरिदिएपछि यस्ता रोग ठीक हुन्छ भन्ने मान्यता छ, तर त्यो गलत हो । तत्कालीन अवस्थासँग जुध्न नसकेपछि एउटालाई केही भयो भने अरुलाई पनि त्यस्तै हुन्छ । ढल्नु, मुर्छा पर्ने मात्र होइन, परीक्षा दिन जाँदा आँखा नदेख्नु, हात नचल्नु जस्ता घटना पनि हुन्छन् ।
० यौनजन्य घटनामा महिला कि पुरुष दोषी ?
– मेरो अध्ययनले पुरुष बढी दोषी देख्छ, यद्यपि महिला पनि दोषी होलान् । तर हाम्रो समाजमा भएका घटनालाई विश्लेषण गर्ने हो भने पुरुष दोषी छन् । पुरुषहरू यौनइच्छा पूरा गर्न डान्सवार, दोहोरी अथवा कुनै स्थानमा जाने गर्छन् । महिलालाई बाध्य बनाइन्छ, टर्चर दिइन्छ ।
० यो अवस्थामा हाम्रो नयाँ पीडित कता जाँदैछ ?
– व्यस्त जीवन एक्लोपनमा हराउँदैछ । युवा पिँढी मात्र होइन, एउटा घरमा चारजनाको परिवार छ भने उनीहरू संवाद गर्दैनन्, मोबाइलमा चारतिर फर्केर व्यस्त रहन्छन् ।
० कता जाँदैछ हाम्रो समाज ?
– यदि यो विकराल अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न सकिएन भने हाम्रो समाज भताभुंग हुनसक्छ । हाम्रो रीतिरिवाज, परिवार र समाजलाई नैतिकताको बाटोमा डो-याउने हो भने सबैभन्दा पहिला व्यक्ति सचेत हुनुपर्छ । हामीकहाँ नैतिक शिक्षाको अभाव देखियो, सामाजिक सञ्जाल र विकृति मनोविकार हाबी भएको पाइयो ।
० कसरी नियन्त्रण लिन सकिन्छ ?
– यसका लागि सामूहिक प्रयास आवश्यक पर्छ, सबैभन्दा पहिला आफू सचेत रहने । जीवनशैलीमा परिवर्तन गर्ने, सकरात्मक सोच र नैतिक शिक्षामा जोड दिनुपर्छ ।
० मनोविद् बन्न के कुराले पे्ररित ग¥यो ?
– दिदी पत्रकारिता र मनोविज्ञानको विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो । मनोविज्ञान पढ्यो भने मान्छेको अनुहार हेरेर सबै कुरा थाहा पाइन्छ भन्ने मनोविज्ञानले काम ग¥यो ।
० अनुहार हेरेर मान्छेको सबै कुरा थाहा पाइँदो रहेछ ?
– होइन रहेछ, सबै कुरा थाहा पाउन उसको व्यवहारको अध्ययन गर्नुपर्ने रहेछ ।
– विराटनगरमा जन्मियौं, बुवा न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो, उहाँ सरुवा भएर ललितपुर आउनुभयो, त्यहीँ हुर्कियौं । हामी तीन दिदीबहिनी, म कान्छी, एउटा भाइ छ । एउटी दिदी कानुन व्यवसायी, अर्को पत्रकारिता क्षेत्रमा हुनुहुन्छ । उच्च शिक्षा आरआर र त्रिचन्द्रबाट गरेकी हुँ ।
० विवाह नि ?
– श्रीमान्को घर गोरखा हो, उहाँ कलेज पढाउनु हुन्छ । त्रिचन्द्रमा उहाँ म्याट्रोलोजीको विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो, म मनोविज्ञानको ।
– ठ्याक्कै पे्रम विवाह त होइन, तर विवाहअघि चिनजान र हाई हेल्लो थियो ।
० चिनजान भएका बेला उहाँको मनोविज्ञान अध्ययन गर्नुभएन ?
– मलाई मन पराउनु हुँदोरहेछ, तर मैले त्यसतर्फ खासै ध्यान दिएकी थिइनँ । पछि एक्कासि विवाहको कुरो आयो ।
– दुई छोरा छन्, एउटा भर्खर २२ महिनाको भयो, ठूलो १० वर्ष लाग्यो ।